Aruba announces re-opening dates for international visitors | Travel Destination Update
Ikhaya » izithuba » Iindawo ekuyiwa kuzo » IAruba ibhengeza imihla yokuvula kwakhona iindwendwe zamanye amazwe
Iindaba zokuhamba zeAruba • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba zeShishini lokuBuka iindwendwe • Iindaba zeNdwendwe zaMazwe ngaMazwe • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Ukulinganiswa kweeholide • Iindaba ezijongene noKhenketho • Safety • Iindaba zoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo
IAruba ibhengeza imihla yokuvula kwakhona iindwendwe zamanye amazwe
Urhulumente we Arubha namhlanje ubhengeze ukuba ilizwe liza kuyivula ngokusesikweni imida yalo kwaye iphinde yamkele ukhenketho olungena ngaphakathi kubakhenkethi, abavela Bonaire kunye neCuraçao on Juni 15, i Caribbean (Ngaphandle kwe ilizwe lasedominic kwaye Haiti), iYurophu, yaye Khanada on Julayi 1, 2020, elandelwa ziindwendwe ezivela iunited States isiqalo Julayi 10, 2020. Imihla yokuvula ngokusesikweni kwezinye iimarike, kubandakanya amazantsi Emelika kwaye kuMbindi Merika kusafuneka igqitywe.
Isigqibo sokuvula imida kwakhona, ebezivaliwe ngenxa Covid-19 Izithintelo ekuqaleni kuka-Matshi, zenziwa ngokudibeneyo neSebe lezeMpilo kwaye zithathela ingqalelo isikhokelo esiqhubekayo soMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) kunye namaZiko oLawulo lweZifo (CDC) kwi iunited States.
“Ukhuseleko nentlalo-ntle yabahlali bethu neendwendwe zezona zinto ziphambili esizibeke phambili. Njengoko silungiselela ukuvula imida yethu kwakhona, Arubha ibeke iinkqubo eziphambili zempilo yoluntu ukunciphisa umngcipheko we-COVID-19 kwesi siqithi, utshilo u-Nkulumbuso UEvelyn Wever-Croes. "Sithathe amanyathelo ngononophelo kwaye ngabom ukuvavanya imeko yangoku kwaye siqiniseke ukuba kukhuseleke ngokusemandleni kwaye kufanelekile ukuqala inkqubo yokuvula kwakhona."
Arubha ithathele ingqalelo uluhlu lwezinto kwinkqubo yokuphinda kwenziwe izigqibo, kubandakanya:
Uqulatho lwasekhaya: Impendulo enobundlobongela ekuchongeni nasekulawuleni iimeko ezinokubakho ze-COVID-19 ibe nefuthe kwaye yanciphisa ifuthe kuyo Arubha.
Ukuhamba kancinci kokuthintelwa kwe-On-Island: Njengokuba iimeko ziphucukile, izithintelo kwesi siqithi ziye zarhoxiswa ngononophelo ngaphandle kwenkxalabo enkulu.
IMigangatho yezeMpilo eQhelekileyo: Imigaqo-nkqubo emitsha yezempilo nokhuselo sele iphunyeziwe kubanzi besiqithi, kugxininiswa kakhulu kumashishini okhenketho nakubuka iindwendwe ukuqinisekisa ukuba iindwendwe ziziva zikhuselekile.
Unyaka ngamnye, ngaphezu kwesigidi seendwendwe ziza Arubha Ukusuka kwihlabathi jikelele. Njengeendawo ezininzi apho uqoqosho luqhutywa kukhenketho, ukuvulwa kwemida yeyona nto ibalulekileyo kwaye kungenisa "into entsha" okwangoku.
Abahambi baya kucelwa ukuba balandele inkqubo entsha yokuqalisa kunye nokuhla ukungena kwilizwe. Iimfuno zokuhamba ezinyanzelekileyo kungekudala ziya kufumaneka kwi-Aruba.com.
“Ngelixa kuza kubakho uhlengahlengiso oluyimfuneko, iindwendwe zethu ' Arubha Amava asaza kuhlala enesiqithi esinye sonwabe, utshilo uRonella Tjin Asjoe-Croes, uCEO weAruba Tourism Authority (ATA). “Siqinisekile ngamanyathelo esiwathathileyo Arubha ivulekele ulonwabo kwakhona. ”
Igunya lesikhululo senqwelomoya i-Aruba lisebenze neSebe lezeMpilo yoLuntu kwaye landela izikhokelo zoMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) ukuphumeza amanyathelo amaninzi njengokuhlola, ukubanakho kuvavanyo lwe-PCR xa befika, ukuvavanywa kobushushu, oochwephesha kwezonyango kwindawo, kwindawo yokumakisha, ukhuselo olongezelelekileyo kunye nokukhuseleka, uqeqesho lwePPE olunyanzelekileyo kubo bonke abasebenzi, nangaphezulu.
Ukongeza kumgama wentlalo, Arubha ubeka imida yamandla okwethutyana kwezinye zeendawo zabakhenkethi ezithandwayo ukunciphisa ukuhamba kwabatyeleli ngamaxesha aphezulu kwiindawo ekurhwetywe kakhulu kuzo, ngaphandle kokuthintela ufikelelo jikelele.
Ukukhusela abatyeleli bethu - 'iAruba yezeMpilo kunye neKhowudi yolonwabo'
Kutshanje, uMphathiswa wezoKhenketho, iMpilo yoLuntu nezeMidlalo, kunye neSebe lezeMpilo yoLuntu kunye neGunya lezoKhenketho lase-Aruba bazise ngenkqubo entsha yezokhuseleko nococeko ngentsebenziswano nabachaphazelekayo abaphambili kwicandelo labucala. I-'Aruba yezeMpilo kunye neKhowudi yoLonwabo ', echaza imigangatho engqongqo yokucoca kunye nococeko, inyanzelekile kuwo onke amashishini ahambelana nezokhenketho kwilizwe liphela. Le protocol izakuqinisekisa ukuba amashishini ezokhenketho ahambelana ngqo nezikhokelo ezingqongqo zempilo, ezococeko kunye neenkqubo zokuphambuka ekuhlaleni. Ishishini ngalinye liya kudlulela kuluhlu lwemithetho emitsha kunye nemigaqo yendlela yokusebenza kwilizwe le-COVID-19. Ukugqitywa, amashishini aya kuvavanywa liSebe lezeMpilo yoLuntu kwaye afumane iSatifikethi seKhowudi yeGolide sakube samkelwe.